Ambohimangakely-Antananarivo: Tratra ireo mpangalatra fiara Sprinter
lundi, 12 août 2019 17:09
Fiara Sprinter nipetraka tao anaty garazy teny Ikianja Ambohimangakely, no nisy nangalatra ny 03 aogositra 2019. Nofitahin’ireo mpangalatra ny “gardien”, nolazaina fa hitondra marary ilay fiara. Nanomboka teo no tsy hita ilay fiara.
Nanao ny fikarohana ny Zandary avy amin'ny tobim-paritra Soamanandrariny. Nisy ny olona telo noahiahiana taorin’izay ka nosamborina sy natolotra ny Fitsarana. Naiditra am-ponja vonjimaika tany Tsiafahy ny iray tamin’ireo, nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny roa.
Teny amin’ny faritra Ambohidratrimo no hita ilay fiara ny 09 aogositra 2019, ka nidina teny ny Zandary ary tratra tao anaty tanànan’olona ilay fiara ; olona maromaro no voasambotra. Tany Ankazobe no nisamborana ny lehilahy iray atidohan’ity halatra fiara ity. Miisa fito mianadahy no voasambotra tamin’ity raharaha ity.
Natolotra ny Fitsarana teny Anosy androany izy ireo, ary nivoaka ny didy ka roa nidoboka any Tsiafahy, efatra Antanimora, iray nahazo fahafahana vonjimaika.
Efa naverina amin’ny tompony kosa ilay fiara.